धेरै नै सुन्दर हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, साथै आकर्षित पनि ! जीवनशैली – List Khabar
Home / जीवनशैली / धेरै नै सुन्दर हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, साथै आकर्षित पनि ! जीवनशैली
admin August 1, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 99 Views
सुन्दर जे सुकै देखे पनि खुशी रहने मानव जतिको स्वभाबनै हो। अझ आफ्नो प्रेमिका-श्रीमती सुन्दर परोस् भन्ने सम्पूर्ण पुरुष जतिको चाहना हुने गर्छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार विभिन्न राशिका छुट्टै विशेषता हुने गर्दछन् भने आनी-बानि देखि लिएर धेरै कुराहरु राशिले निर्धारण गर्ने हुन्छ। पुरुषलाई भुतुकै बनाउने सुन्दरता साथै गुनले भरिपुर्ण रहने ३ राशी ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। आज हामी तपाईलाई कुन राशिका महिलाहरु अत्याधिक सुन्दर साथै आकर्षक रहने गर्छन्,यस बारे जानकारी गराउने छौं। यी राशिका महिलाहरुको मुहार मात्र सुन्दर नभएर चरित्र समेत आकर्षक हुने गर्दछ।
वृश्चिक राशिमा महिलाहरु सुन्दर मुहारको अलावा मिठो बोलिका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छन्। कुनै पनि पुरुषलाई आकर्षित गर्ने क्षमता रहने यस राशिका महिलाहरु बोलीको मिठो बाड समेत छोड्ने गर्छन्। हल्का जिद्दी रहने भएता पनि यस राशिका युवतीहरुको जिद्दीपनले समेत पुरुष आकर्षित गर्ने गर्छ।
यस राशिका महिलाहरु प्राय मिजासिला हुने गर्छन् भने सुन्दरतामा पनि केहि खोट नभएका हुन्छन्। आफ्नो स्वभावका कारण आकर्षित रहने यस राशिका युवतीहरुमा उमेर बढ्दै जाँदा सुन्दरता बढेर जाने गर्छ। अत्यधिक सुन्दर रहनाले धेरै पुरुषहरु यस राशिका युवती तिर खिचिने गर्छन्। तर यस राशिका महिलाहरु हल्का क्रोर भने जरुर रहन्छन्।
वृष राशिका महिलाहरु सुन्दरताले जो-कोहीलाई ओअनी मुर्छित पर्ने क्षमता राख्छन्। शान्त स्वभाव रहने यस राशिका महिला अथवा युवतीहरु लजालु स्वभावका हुनाले पनि पुरुषहरु आकर्षित हुने गर्छन्। बुद्दिमानी समेत रहने यस राशिका महिलाहरु प्राय आफ्नो शर्तमा जिद्दी रहने गरेता पनि बुज्जकी हुनाले पुरुषहरु आकर्षित रहने गर्छन्।
Previous युवराजलाई दु’र्ववहा’र गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई का’रबाही होस : नायिका पुजना प्रधान
Next महोत्तरीमा सर्पको बिगबिगी, आधा साउनमै ५० नाघे सर्पदंशका घटना